Xarunta Caafimaadka Habdhaqanka - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xarunta Caafimaadka Habdhaqanka
24/7 taageero ayaa la heli karaa haddii aad caawimaad u baahan tahay.
Looma baahna gudbin si loo arko xirfadlaha caafimaadka hab dhaqanka
Dad badan ayaa la kulma caafimaadka maskaxda ama arrimaha isticmaalka maandooriyaha mar uun noloshooda. Kaligaa ma tihid Taageerada bixiyeyaasha daryeelka iyo bulshada waxay ka dhigi kartaa arrimahaan kuwo la maareyn karo waxayna kaa caawineysaa inaad dareento sida ugu fiican.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee xubnaha Washington waxay wici karaan Khadka Kalkaaliyaha Talada ee Kalkaaliyaha caafimaadka bilaash ah 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii 1-866-418-2920 (TTY Relay: Garaac 711).
Ma hubo halka laga bilaabayo? Isku day hageena shan-tallaabada ah si aad ugu hesho daryeel caafimaad hab-dhaqan leh CHPW.Baro sida
Raadi xirfadlayaal caafimaad hab-dhaqan, lataliyayaal, iyo daaweyn kale oo kuu dhow.Raadi keydkeena
Maareeyayaasha Kiiska ee CHPW ayaa kaa caawin kara inaad dejiso oo aad gaarto hadafyada caafimaadka hab dhaqanka — yar iyo weynba.Wax dheeri ah baro
Laga soo bilaabo 90-maalin oo la buuxiyo si loo soo diro dalabka daawooyinka laguu qoro, faa iidadaada daawada CHPW waa mid jilicsanWax dheeri ah baro
Adeegyada Ku Salaysan Bulshada
Kooxdayada Barnaamijyada Bulshada waxay kugu xirayaan adeegyada ku saleysan bulshada.Wax dheeri ah baro
Khadadka Dhibaatada Gobolka
Waxaa jira khadadka taleefannada ee heer gobol iyo heer degmo oo kaa caawin kara haddii aad dhibaato haysato.Eeg khadadka dhibaatada
Dabeecadaha iyo Caafimaadka Maskaxda FAQ
Su'aalo ma qabtaa Kaligaa ma tihid: Waxaan ka jawaabnay qaar ka mid ah xubnahayaga su'aalaha ugu badan ee caafimaadka hab dhaqanka.Tag su'aalaha la iska weydiiyo caafimaadka habdhaqanka
Ombuds waa qof ikhtiyaar u heli kara inuu ku bixiyo caawimaad bilaash ah oo qarsoodi ah xalinta tabashooyinka la xiriira adeegyadaada caafimaadka hab dhaqanka. Waxay kaa caawin karaan haddii aad leedahay cabasho caafimaad hab-dhaqan, rafcaan, ama dhageysi cadaalad ah si aad u xalliso walaacyadaada heerka ugu hooseeya ee suurtogalka ah. Ombuds-yada ayaa ka madax banaan qorshahaaga caafimaadka. Ombuds-yada waa qof soo qabtay adeegyo caafimaad dabeecadeed, ama qof xubin qoyskiisa ah uu soo maray adeeg caafimaad.
Adeegso lambarrada taleefannada ee hoose si aad ula xiriirto ombuds aaggaaga:
Dhagsii si aad u aragto Liiska Telefoonka Ombuds-ka
Jasiiradda, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom 1-888-336-6164
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: May 7, 2021